12 Best Vlog duubista iyo ayeey Software
1 Vlogging Talooyin: Sida loo bilow Vlog ah
2 10 Fikradaha Vlog fudud in aad tijaabiso
3 Top 10 Best kamaradaha Vlogging
4 12 Best Vlog Rikoodh & ayeey Software
Qalabka lagu talinayo u fiican iyo Easy Vlogging
Maanta, blog video , ama vlog, waxa uu noqday aalad aan laga maarmi suuq online. In kastoo vlogging, aad si fudud ku xidhi kartaa macaamiisha aad heer ka badan shakhsi Korka ay fiiro. Halkan waxaan ku xalliso qaar ka mid ah qalab waxtar leh si aad u bilowdo aad vlog u gaar ah.
Qeybta 1: Screencasting Qalabka Vlogging
Qeybta 2: ayeey Qalabka Vlogging
Qeybta 1: Tools Screencasting & Rikoodh u Vlogging
Haddii aad rabto in aad isticmaasho webcam your computer ayaa si aad aad u gaarka ah videos, qaar ka mid ah software wanaagsan oo fudud loo isticmaali karo si loo caawiyo inaad gaarto in.
1. Google Plus Live tagi
Google Plus Live tagi kaa caawin kartaa inaad si fudud loo abuuro guddi ama nooca-wareysi video. Just gabyi in aad xisaabta Google Plus, bilaaban "Hangout" fadhiga video shirarka iyo awood "tagi On Air". Daayey Mar bilaabmin, dadka daawan karin iyo duubo toos ah u tegi doonaa oo u dhiganta account YouTube. Baro wax badan oo >>
2. Pamela u Skype
Pamela u Skype waa lacag la'aan, lagu kalsoonaan karo oo si fudud loo isticmaali audio Skype iyo software video duubo. Waxaa loo isticmaali karaa in vlog ama abuuro podcasts. Qaababka ugu muhiimsan waxaa ka mid ah record Skype chat, Skype farriinta codka, farriinta codka weeraryahanka via farriinta codka email iyo dareen ciyaaryahan dhawaaqa. Baro wax badan oo >>
DemoCreator Waa barnaamij si sahlan loo isticmaalo diiwaan geliya hawlaha ee shaashadda kombuyuutarka aad la kaliya qasabno laba. Waa fiican ee la abuurayo qaar ka mid ah waxbaridda videos si aad dhagaystayaasha kaliya daawan kartaa oo baran. Waxa kale oo ay bixisaa dhawr fursadood oo gaarsiinta: ama aad daabici karo sida goodhiyaha Flash fadhigiisu yahay web la wadaago ama badbaadin qaabab kala duwan. Baro wax badan oo >>
Qeybta 2: tafatirka Qalabka Vlogging
Habka wax soo saarka post waa loo siman yahay ee impertinence in aad vlogging. Halkan aan tagi fursadaha qaar ka mid ah laga heli karo iyada oo ku xidhan heerka xirfadaha iyo waayo-aragnimo. Waxaad xulan kartaa taasi waa mid la saxda ah ee aad u baahan tahay.
Billowga / Options Free
In kasta oo ay kala duwan software video tafatirka badan kharash, waxaa jira qaar ka mid ah raagaya iyo sare ee qalab diyaar u ah qashin ama xitaa lacag la'aan ah oo dhan. Qaar ka mid ah fursadaha ka mid ah:
Qalabaysan la soo diyaariyeen ah ee qaababka video tafatir oo fantastik ah, la taaban karo, iMovie waa qalab tafatirka fikrad video qof kasta. La Timaadda kasta iMac cusub, waa lacag la'aan waxayna siisaa tiro balaadhan oo ah saamaynta iyo qalab nooc, sidaas waxaa mar walba loo arko qalab muhiim u ah user wax Mac si kor loogu qaado vologs ay. Wax dheeraad ah >>
2. Windows Movie Kan sameeyey,
Windows Movie Abuurihiisii ​​loo isticmaalaa in lagu guraa nidaamka ka hawlgala Windows oo ay ku caawineysay amateurs muddo aad u dheer. Waxaa qoreysa hawlaha jiitaa-n-dhibic oo ay bixisaa ku dhowaad dhammaan hawlaha video tafatirka classic ay ka mid yihiin goo, isku shaandheyn, kala, isu geeyo sidoo kale ku daray track music, filtarrada iyo mawduucyada. dheeraad ah ka baro >>
Avidemux waa tafatirka qalab kale free video caan ah. Waxay qaban karaan inta badan oo ka mid ah hawlaha tafatirka aasaasiga ah sida dalagga, isku shaandheyn, isu geeyo oo si aad u wanaagsan gooyay. Hawlaha la iswada karaa iyadoo la isticmaalayo mashaariicda, safka shaqada iyo awoodaha scripting awood badan. Ka sokow in, waxa ay sidoo kale kaydka liiska fursadaha filter fiican ee ku daray kuwa taabtana dhameystir dheeraad ah. Wax dheeraad ah >>
Marka aad tahay qof aqoon u leh hawlaha video tafatirka aasaasiga ah, waxaa laga yaabaa in waqti ay isku dayaan in wax ka badan wax yar ka adventurous. Halkan waxaa ku qoran qaar ka mid ah oo dheeraad ah yaase u jaban fursadaha:
1. Wondershare Filmora (asal ahaan Wondershare Video Editor)
Wondershare Filmora (asal ahaan Wondershare Video Editor) waa aalad si fudud addoonsada oo awood u isticmaala in ay ku biiraan, cut, kala, shaandheyn clips dalagga, qasabno gudahood. Waxa kale oo ay kaydka liiska filter iyo fursadaha ay ku darto taabtana dheeraad ah si aad video. Muuqaal kale oo waa weyn yahay in, waxa kale oo ka mid ah qaar ka mid ah muuqaalada tafatirka gaar ah sida PIP, isku dari kara mosaic, wareeg ah usii iyo in ka badan. Baro More >>
2. Adobe jilitaankii Qaybaha
Sida version ah furteen-hoos ee jilitaankii Pro version, Adobe jilitaankii Qaybaha uu leeyahay oo kaliya muuqaalada ku filan qora video. By samaynta isticmaalka fursadaha iswada, saamaynta gaar ah, iyo in-app hanuun, si fudud ayaa loo filimada fantastic aad noqon kartaa video clips. Waxa kale oo ay taageertaa dhinac saddexaad fur-tago badan oo siyaada ah. Wax dheeraad ah >>
PowerDirector waa codsi video awood badan tafatir oo bixisa badan oo xul ah arrimo iyo saamaynta gaar ah u soo design iminka si aad video abuurka. Waxaa qoreysa xawaaraha adduunka ugu dhaqsiyaha badan tafatirka iyo xitaa aad u saamaxaaya in ay wax soo saarka 4K video iyo qoraaga content Blu-ray. Baro wax badan oo >>
Haddii aad rabto in aad vlog xirfad dheeraad ah, ka fiirsan hagaajinta kaliya ee software ka hor maalgashiga camera aad u grand. Halkan waxaa ku qoran liiska qaar ka mid ah qalabka tafatirka badan oo horumarsan, waayo, waxaad ka soo xusho.
Pinnacle Studio waa wax walba oo aad u baahan tahay inuu ka soo leexdo video clips galay filimada la yaab leh. Waxay bixisaa doorasho ka badan 1500 saamaynta iyo sidoo kale maktabad dhawaaqyo boqortooyada-free iyo heeso si ay u caawiyaan kor videos. Tani qalab video tafatirka ay sidoo kale aad u saamaxaaya in ay wax soo saarka ee video in HD iyo xitaa 3D. Ka sokow, soo diyaariyeen wayn ee Casharrada waxaa loogu talagalay soo afaysto xirfadaha tafatirka aad. Baro More >>
Pro Goo Final waa barnaamij video tafatirka casri ah. Waxay bixisaa kala duwan ku dhowaad dhammaan sifooyinka video tafatirka iyo fursadaha aad ka fekeri karto, sida taageerada .Wadashaqayntaas multi-Cam, qabashada xigxiga Dufcaddii sidoo kale ka siib-in dhinac saddexaad taageero. Si kastaba ha ahaatee, waa mid ka mid ah software ka video tafatirka ugu qaalisan ee lagu iibiyo suuqa. Sidaas qabaa labo jeer ka hor inta aadan go'aan kama dambaysta ah. Wax dheeraad ah >>
Laxamiistaha 3. AVID Media
Laxamiistaha Media AVID waxaa loogu talagalay dadka isticmaala sare iyo dunida video. Waxaa badan oo ka mid ah qaababka sida animatte, dunta 3D, rinjiga, matte muhiim ah live, midabka qalab la saxo iyo wax ka badan si ay u sahamiyaan iyo codsan bixisaa. Waxay leedahay aalada faahfaahsan iyo maamulka tafatir ah u isticmaala. Ka sokow, waxa ay sidoo kale bixisaa fursado software iyo hardware lagu hormariyo si loo kordhiyo shaqeynta barnaamijka. dheeraad ah ka baro >>
> Resource > Video > 12 Tools talinayo u fiican iyo Easy Vlogging